Puntland iyo Jubbaland oo ka baaqsaday kaqeyb galka Shirka Hiigsiga 2016 – STAR FM SOMALIA
Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qeyb gelin doonin shirka looga hadlayo barnaamijka Hiigsiga cusub ee New Deal-ka ee maanta ka furmaya magaalada Muqdisho
kaasoo ay shir gudoominayaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ergeyga Qaramada Midoobey Nicholas Kay.
Shirkan ayaa looga hadlayaa qorshayaasha sanadka 2016 iyo waxyaabaha la qaban doono mudada u hartay dowladda, iyadoo horay balantu aheyd in 2016 ay doorasho ka dhacdo.
Puntland iyo Jubbaland ayaa horay u qaadacay ka qeyb galka shirkan, kadib markii ay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen inay marin habaabisay dastuurka dalka u yaala.
Wasiir kuxigeenka Warfaafinta Maamulka Jubbaland oo saaka la hadlay mid ka mid ah Idaacada Muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisa aanu ka qeyb geli doonin shirkaas.
“Anaga mowqifkeena shirkaas horay ayaa u cadeynay kamana qeyb galeyn, waxayna aheyd in marka hore Madaxweynaha Soomaaliya inaan iska aragno arrintan “ayuu yiri Geelle Maxamed Wasiir kuxigeenka Warfaafinta Jubbaland
Sidoo kale Maamulka Puntland ayaa iyana cadeeyay in aanay shirkaas ka qeyb galeyn, kadib markii dowladda Federaalka ku eedeeyeen inay shirkii Cadaado ee lagu dhisay Maamulka Galmudug ay gadaal ka riixeysay.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa shirkan ka qeyb galaya, isla markaana la dhinac fariisanaya Madaxda dowladda iyo Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Soomaaliya oo si rasmi ah u furay shirka (New Deal-ka)